“..Haddaanu ku Nidhi [Muuse Biixi] Cod ku siin Mayno, oo Burco Cod kuuma Hayso … Ma Xabad-baa nalagu Qabsanayaa”Xildhibaan Bidhi | Maalmahanews
“..Haddaanu ku Nidhi [Muuse Biixi] Cod ku siin Mayno, oo Burco Cod kuuma Hayso … Ma Xabad-baa nalagu Qabsanayaa”Xildhibaan Bidhi
Qaar kamid ah Xildhibaanada golaha deegaanka Degmada Burco, ayaa gudoomiyaha Xisbiga tallada haya ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi ku eedeyey inuu bilaabay ollole ay gaashaan u yihiin guutooyin ka tirsan Ciidamada Qaranka, isla markaana ay wehelinaayen shaqaalaha iyo gaadiidkii dawlada. Waxa kaloo, Xildhibaanadu eedo usoo jeediyeen Maayirka Burco Md. Muraad kaasoo ay ku tilmaameen inuu baal-maray masuuliyadda iyo xilkii uu hayey, isla markaana uu lumiyey dhex-dhexadnimadii iyo kalsoonidii ay ku qabeen bulshada reer Burco.
Xildhibaanada oo War-baahinta shalay la hadlay ayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka waxa ay ugu baaqeen inay tallaabo ka qaadan dhacdadadii ama falkii ka dhacay magaalada arbacadii doraad, kaasoo Xildhibaanadu ku tilmaameen inuu ahaa tallaabo sharci darro ah oo ay uu badheedhen Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE iyo xubnaha xulufada la ah ee Xukuumadda.
Xildhibaan Mubaarig Yuusuf (Bidhi), ayaa ku tilmaamay dhacdooyinka is-huwan ee kowsaday safarka Gudoomiye Muuse Biixi kuwo saan-saankeedu yahay mid ifafaale u ah qorsheyaal u qarsoon Muuse Biix iyo Xisbigiisa, isla markaana ay ugu talo-galeen inay ku boobaan codadka marka xilliga doorashada la gaadho, isagoo arrimahaa Xildhibaanku ka hadlaya, waxa uu yidhi: “..Waxa ayaan darro ah in aan waxba nalaga weydiin wixii Shalay Magaalada ka dhacaye, in Ciidamo Duub-cas ah oo Gobolka aan hore loogu arag la keenay. Waxa meesha marayey Muuse Biixi oo Musharax sheeganayey, waxa weeye Musharraxa waqtigiisi lama gaadhin, oo waxa tartamaaya saddeex Musharrax. Haddaanu ku nidhi Cod ku siin mayno oo Burco Codkuma hayso oo waanan dooneyn, ma xabad-baa lanagu qabsanayaa?. Ma dhoolatus ciidan-baa nalagu sameynayaa. Runtii arrintan shalay ka dhacday gobolka togdheer waa mid taarikhdu qoro doonto, kana hadhimayno..”.
Sidoo kale, Xildhibaan Bidhi, waxa uu farriin adag u diray guddida Doorashooyinka qaranka, “..Gudida doorashooyinka waxaan uu sheegaynaa sidan uu arko shalay ayey doorashaddii dhacday oo shalay baa nala qabsaday. Haddaba sideeba la isku aaminaya oo Muuse loola tartamayaa, iyadoon la gaadhin doorashaddii oo aan la tartamin, aan sanaaduuqii ool ayaa ciidankii oo dhan la keenay marka sideeba la isku aamini karaa..”. Ayuu yidhi xildhibaan Bidhi.
Xildhibaan Axmed Af-yare, ayaa sheegay in jawigii Magaaladu lahayd doraad uu ahaa mid Bandoo aan ka dhicin. Taasina ay ahayd mid ka dhalatay Guutooyinka Ciidanka ah ee lasoo geliyey, waxaanu yidhi: “..Waxa cadaatay in duub-cas ina qabsatay, in Magaaladii Bandoo la saaray, oo aad moodeysay in Alshabaab soo gashay, intaa sida loo shaqeynaayona lama aamin karo. Waayo?. Koomishanka waxaan leeyahay waad arkeyseen duub-castii, sidee hadhowto loo aamin kara (KULMIYE) sow sanaaduuqda Doorashadana duub-casta lagu wareejin maayo..”.
Geesta Xildhibaan Axmed Af-yare waxa uu maayirka degmada Burco inuu xaalka bixiyo hadal goob fagaare ah ka jeediyey, kuna sheegay inuu Musharrax Xisbiga KULMIYE Gobolka Togdheer ugu hayo 50,000 oo Cod, isagoo arrinta Xildhibaanku ka hadlaya waxa uu yidhi “..Maayirka waxaan leeyahay Burco oo dhan ayaa lagu dhiibay oo aad masuul ka tahay, waxana lagugu dhaariyey Maxkamad, xaq ummaad lahayn Shalay [doraad] inaad tidhaahdo, anigoo Axmed Faarax ah, ama anigoo sidaas ah, ayaan 50-kun oo Cod jeebka idinku haya, bal sideebaad Magaalada inteedii kale ku xukuumeysa, marka laga reebo intii aad afka ku dhufatay iyo intii aad lacagta uu haysay, waxan ku leeyahay Kalsoonida Magaalada ha iska lumin wixii aad sameysayna Xaalka bixi. Ninkii aad wax ugu ballaan qaaday maha Xisbiyadda kalena xaal si..”.
Sidoo kale, Xildhibaan Siciid Axmed Raage, ayaa isna geestiisa si weyn uu duray ficilladii ka dhashay Safarkii Musharrax Muuse Biixi ku yimi Magaalada Burco, kaasoo uu ku siffeeyey inuu ahaa mid laga dheehanaayey cabsi iyo kalsoonid darro Gudoomiyaha KULMIYE ka qabo gobolka Togdeer. “..Waxa gudoomiyihii Xisbiga KULMIYE loo sameeyey waxaan Madaxweynaha loo sameyn, waxanu kala qaybiyey Magaaladii Burco, oo uu geesna ka leexday baqdin awgeed, waayo isagoo Musharrax ah oo cod doonaya, wuxuu ahaa ninkii ummadda kasban laha, waxanu uu aragna waxaan ku habooneyn inuu sameeyo qof ummadda Cod ka rabbo..”.
Xildhibaan Maxamuud Xasan Dhego-laab, ayaa sheegey in safarka hoggaanka KULMIYE uu ahaa oloole dhab ah oo loo adeegsaday ciidamada Qaranka, shaqaalaha dawladda iyo gadiidkii Dawladdu lahayd sidaas darteedna masuuliyadda arrintani tahay mid looga fadhiyo gudida doorashooyinka inay waajibkooda ka gutaan isla markaana tallaabo sharciya ka qaadan.
Ugu danbeyn xildhibaan Keyse Cabdi Raage ayaa maayirka uga digey inuu hantida qaranka ugu olooleyo xisbi ama shaqsi, balse gaadiidka iyo hantida qaranka ee ay masuulka ka yihiin loogu talo galay in loogu adeego bulshada, isla markaana aanay banaaneyn inay cid gaar ah loogu raali-geliyo.